Kudzidzisa Bhaibheri Marudzi ekuAmerica muNew York City
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Basque Bislama Catalan Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Croatian Czech Danish Dutch Estonian Fante Finnish French Galician Georgian German Greek Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hungarian Igbo Indonesian Italian Japanese Kazakh Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Lithuanian Luo Malay Malayalam Nahuatl (Central) Nahuatl (Huasteca) Ndebele (Zimbabwe) Ngabere Norwegian Oromo Persian Polish Portuguese Portuguese (Portugal) Punjabi Romanian Russian Serbian Serbian (Roman) Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Tahitian Tajiki Tarascan Telugu Thai Tigrinya Turkish Ukrainian Urdu Valencian Welsh Yoruba Zulu
Kuwana Mashoko Akanaka Pamhemberero Yakaitwa kuNew York City
Ruzhinji rwevanhu rwunofunga kuti vanhu vakawanda vemarudzi akatanga tanga kugara kuAmerica, muUnited States, vane nzvimbo dzavanogara vari vega dziri kumaruwa munyika yacho. Asi chokwadi ndechekuti vanopfuura 70 muzana vemarudzi iwayo vanotogara mumaguta. Kubva musi wa5 kusvika musi wa7 June 2015, kuNew York iyo iri guta rakakura kupfuura mamwe muUnited States, kwakaitwa mutambo unonzi “Gateway to Nations,” uyo waibatanidza marudzi ese iwayo. * Zvimwe Zvapupu zvaJehovha zviri kuNew York pazvakaziva nezvemutambo uyu, zvakabva zvaronga kunopindawo. Nemhaka yei?
Zvapupu zvaJehovha zvinoshandurira mabhuku anotsanangura Bhaibheri mumazana emitauro, kusanganisira mitauro yakawanda yemarudzi akatanga tanga kugara kuAmerica yakadai sechiBlackfoot, chiDakota, chiHopi, chiMohawk, chiNavajo, chiOdawa, nechiPlains Cree. Saka Zvapupu zvakaita kuti panzvimbo yaiitirwa mutambo wacho pave nematafura nezvingoro zvinoyevedza zvaiva nemabhuku neturakiti raYou Can Trust the Creator!
Panzvimbo yedu yepaIndaneti yejw.org, panewo zvinhu zvekuteerera zvakarekodhwa nemavhidhiyo zvemimwe yemitauro iyoyo yatichangobva kutaura. Zvapupu zvaiva pamutambo wacho zvakaita kuti vanhu vaivapo vaida kunzwa vateerere zvimwe zvinhu zvakarekodhwa. Vanhu ivavo vakanga vacherechedza kuti zvinhu zvizhinji zvaiitwa, zvairatidzwa nezvakanga zvakanyorwa ipapo zvaingova mumutauro weChirungu kana kuti wechiSpanish.
Vanhu vakawanda vaiva pamutambo uyu vakafadzwa nebasa ratinoita rekushandurira mabhuku edu mumitauro yakawanda yemarudzi akatanga tanga kugara kuAmerica uyewo basa redu rekudzidzisa vanhu Bhaibheri mumaguta nekumaruwa. Mumwe murume aiona nezvemutambo wacho paakaziva nezvebasa redu akakumbira kudzidza Bhaibheri, achiti, “Ndiri kutarisira zuva ramuchandishanyira kuti tizodzidza Bhaibheri!”
Mumwe murume nemudzimai verumwe rudzi rwakatanga tanga kugara kuAmerica avo vari matsi, vakasvika pamwe paiva nemabhuku edu, asi Zvapupu zvaivapo zvakatadza kukurukura navo. Zvisinei, mumwe mukadzi uyo akanga adzidzira mutauro wemasaini uyezve ari Chapupu, akabva asvikawo. Akakurukura navo kwemaminitsi anenge 30 uye akavabatsira kuti vazive nezvegungano reZvapupu zvaJehovha remutauro wemasaini raizoitirwa munharaunda yavo.
Zvapupu zvaJehovha zvinopfuura 50 zvakabatanidzwa pabasa iri rekudzidzisa vanhu Bhaibheri, uye vanhu vakauya paiva nematafura eZvapupu izvi, vakatora mabhuku nemagazini zvinodarika 150 pamazuva ese ari matatu akaitwa mutambo wacho.
^ ndima 2 Ichitsanangura nezvemaitirwo emutambo wacho mazuva ano, imwe nyanzvi inoona nezvemagariro evanhu inonzi William K. Powers, inoti uyu “mutambo usina chekuita nezvechitendero, uyo unoitwa nevarume, vakadzi nevana vachiimba nekutamba.”​—Ethnomusicology, September 1968, peji 354.
Mabhuku Edu Anonyorwa Sei Uye Anoturikirwa Sei?